Tokkoomuun dhimmoota hundaaf bu'uura
Jirbiin waliigaltee arba hiiti akkuma jedhame waliigalteen milkaa’inaaf bu’uura. Ummatni Oromoo ummata guddaa, gaanfa Afirikaati.
Itoophiyaa keessatti baay’inaan sadarkaa duraarra jira. Haa ta’u malee, ummatni kun baay’inasaarra kan darbe dhiibbaan siyaasaafi dinagdee uumaa jiru sadarkaa barbaadameen miti.
Kanaafis sababni tokkummaa dhabuusaati. Ummatni kun rakkoo kana waliin dhalate osoo hintaane summii gitoonni bittaa darban ummata kana qoodanii bituuf akka isaaniif ta’utti facaasaa turanirraa madda.
Injifannoon ummatni Oromoo kaleessa diinotasaarratti galmeessaa ture meeshaa waraanaa ammayyaatiin osoo hintaane tokkummaasaatiini. Summiin yeroo sana ummata jabaa kana gidduutti faca’e akka ijoolleen ilmaan abbaa tokkoo waliif hingalle, ija shakkiitiin wal ilaalan taasiseera.
Kanumarraa ka’uun godinaan, aanaafi gandaan walqooduurra darbee ilaalchi lagaan walqooduu dagaaguu danda’e. Walqoqqoodiinsi kun ummata jabaa kana humna dhowwuun alagaaf humna jabaa uumaa ture. Ministirri muummee Itoophiyaa duraanii, Obba Mallas Zeenaawwii jeequmsa Oromiyaa keessatti mudatee ture ilaalchisanii, “Ummatni Oromoo ummata guddaadha.
Ummatni kun jeequmsaaf kanaan loltuu Itoophiyaa miti loltuun Afrikaayyuu dhaabuu hindanda’u,” jedhanii turan. Kun kan mul’isu ummatichi tokkummaan kanaan humna guddaa qabaachuu mul’isa.
Hayyootni, abbootiin gadaa, jaarsoliin, dargaggoonniifi artistoonni Oromoo tokkummaafi waliigaltee jedhame kana arguuf ifaaja guddaa taasisaa turan. Angafa aartii Oromoo kan ta’e dooktarri Kabajaa Artisti Alii Birraa, “Namamoo Rabbumaa kan seera jallisee, haati keenya takka maaltu addaan nu baase?” jechuun tokkummaa Oromoo labsaa tureera.
Ifaajji gama maraan taasifame ummata naannichaa golee arfan jiran walitti fidee tokkummeesseera. Dhimma kana ilaalchisee paartiileen morkattootaa tokkummaan barana argame seenaa qabsoo Oromoo keessatti isa olaanaadha.
Akka paartiileen morkattootaa Oromoo kunneen jedhanitti dur yommuu godina tokkorra rakkoon ga’u godinaaleen biroo callisaan ilaalaa turan. Amma garuu ilaalchi kun seenaa ta’uun walii birmachuufi waliif dhukkubsachuun bifa addaatiin taasifamaa jira.
Tokkummaa argame kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuufis qaamolee biyya keessaas ta’e biyya alaa waliin qindoominaan kan hojjetan ta’a. Dhimma Oromoorratti garaagarummaa siyaasaa tokko malee hojjechuufis fedhii guutuu qabu.
Amma barri bara itti garaagarummaa ilaalcha siyaasaatiin wal gaarerfatan miti. Caalaattuu, walhubatanii yeroo itti waliin hojjetaniidha. Warraaqsa siyaasaa amma uumameenis ummatni Oromoo kana kan barbaadu.
Akka paartiileen kunneen jedhanitti gamaafi gamana dhaabatanii dhagaa walitti darbachuun qabsoo Oromoo boodatti harkisaa turuu hunduu hubateera. Amma garuu akka kana duraa hojii walitti bishaan dhangalaasuu caalaa paartii Oromoof waan gaarii hojjete tumsaa, kan faallaa kanaa socho’uu ammoo yeroo itti sirreessaa deemaniidha.
Hundaa ol qaamolee hawaasaa gara garaa waliin hojjechuuf carraaqqii guddaa taasisu. Kaleessi seenaa waan ta'eef irraa barachaa har’i ammoo carraa ta’uu hubatamee kan irratti hojjetaniidha. Gara garummaan paartiilee maqaa Oromootiin socho'aa jiran jidduu tures daran dhiphachaa dhufeera.
Walumaagalatti, tokkummaan yeroo ammaa argame seenaa qabsoo Oromoo keessatti isa olaanaadha. Tokkummaa kana caalaatti kan fide miidhaa sababa walitti bu'iinsa daangaatiin qaqqabeedha. Tikkummaan kun walii birmannaa ummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti taasiseen mirkanaa'eera.
Kanaafuu, tokkoomuun dhimmoota hundaaf bu'uura ta'uun hubatamee miirri eegalame kun dhimmoota hundarratti caalaatti cimee ittifufuu qaba.
Torban kana/This_Week 43534
Guyyaa mara/All_Days 1468314